(Waxaa laga soo toosiyay Saudi arabia)
Boqortooyada waxaa yimaada sanadkii in la badan 2 milyan oo ruux Sacuudi Carabiya (/ ˌsɔːdi əreɪbiə / (ku saabsan dhawaaqa maqalka), / ˌsaʊ- / (ku saabsan codkan maqal); Carabi: السعودية as-Su'ūdiyyah ama as-Sa'ūdiyyah), si rasmi ah Boqortooyada Saudi Arabia (KSA; Arabic: المملكة العربية السعودية al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah, ku saabsan codkani (caawimaad · info)}}}, waa dal ku yaal galbeedka Aasiya oo ka kooban qaybta jasiiradda Carabta. Sacuudi Carabiya ayaa ah gobolka ugu weyn ee madaxbannaan ee Bariga Dhexe, oo ah juqraafi ahaana shanaad ee ugu weyn Asia, tan labaad ee dunida Carabta ka dib Algeria iyo 12 -aad ee adduunka ugu weyn. . Sacuudi Carabiya ayaa xuddun u ah Jordan iyo Ciraaq waqooyi, Kuwait ilaa waqooyi bari, Qadar, Bahrain iyo Imaaraadka Imaaraadka Carabta xagga bari, Oman ilaa koonfur iyo yemen xagga koonfureed. Waxaa laga soocay Israel iyo Masar by Gacanka Cadaba. Waa waddanka keliya ee leh xeebta Badda Cas iyo xeebta Gacanka, oo badi dhulkeeda waxay ka kooban tahay lamadegaan, dhul hoose iyo buuro. Sacuudi Carabiya waa dhaqaalaha ugu weyn ee Bariga Dhexe ilaa Oktoobar 2018 iyo 18aad ee adduunka ugu weyn.
Sacuudiga waxee ka mid tahay wadamada Adoonta lahaan jirtay, wadanka sacuudiga waxaa la sameeyay sanadka marka oo ahaa 1902, ninka sameeyay waxa uu ahaa Ibn Sacuudi, waxaana boqortooyada Sacuudiga noqday sanadka marka oo ahaa 1932, cabdul casiis wuxuu dhalay caruur ka badan 50 ruux. Waxaana markii ugu horeesay dhaxlay boqortooyada Wiilkiisa sanadka marka uu ahaa. 1964 kii. Magaciisana waxaa la dhihi jiray (Faysal bin Cabdul Casiis Al sacuudi) wuxuuna bilaabay in uu keeno adoomo. wuxuuna sacuudiga ka abuuray goobo waxbarasho.Sida iskuulo iyo meelaha kale ee cilmiga diiniga lagu barto iyo goobo caafimaad.Sida isbitaalada. Siyaasiyiinta wadanka sacuudiga ma eesan jeclaan jirin siyaasada wadamada reer galbeedka Sida wadanka ingiriiska (English) iyo wadanka kale ee maraykanka (america).
Markii uu bilaawday Dagaalkii Gacanka oo u dhaxeeyay Qaramada Midoobay(QM) iyo wadanka Ciraaq sanadka marka uu ahaay 1991, sacuudiga waxee militari soo dhoobtay xuduudkeeda, isla markaas sacuudiga waxaa lagu soo weeraray sawaariiq waxeena ku dhaceen magaalada (Riyaad) ee caasimada wadanka sacuudiga Waqtigaas kadib sacuudiga waxuu saaxiib fiican la noqday wadanka mareykanka(america) Boqorkii sacuudi carabiya ee 《Fahad bin Cabdul Casiis Al Sacuudi》 waxuu ahaan jiray boqor iyo raiisul wasaare oo loo doortay sanadka marka uu ahaa 1982 kii waxuuna dhintay sabadka marka uu ahaa 2005 tii Kadibna waxaa bedelay Cabdullahi bin Cabdul Casiis Al Sacuudi.
Duurjoogta waxaa ka mid ah Leopard Carbeed, Jahannamo, Dhallinyaro, Dhoobleey, Koontooyin, Gaadhi, bisad ciid, iyo jerboa. Xayawaanka sida xayawaanka, oryx, leopards iyo cheetahs waxay ahaayeen kuwo badan illaa qarnigii 19aad, markii xayawaan ballaadhan ay hoos u dhigtay xayawaankan. Shimbiraha waxaa ka mid ah falcons (oo la qabto oo loo tababaray sidii loo ugaadhsiin lahaa), gorgortanka, maqaarka, waraaqaha, qashinka, iyo bulubyada. Waxaa jira noocyo kala duwan oo abeesooyin ah, kuwaas oo intooda badani yihiin kuwo qarxa. Sucuudi Carabiya waxay ku nooshahay nolol aad u qoto dheer. Deegaanka Badu-yo gaar ahaan waa nidaam hodan ah oo kala duwan. In ka badan 1200 nooc oo kalluun ayaa laga diiwaangeliyey Badda Cas, 10% oo ka mid ah kuwaan ayaa laga helaa meel kale. Tani
A Kingdom Built on Sand, Oil, and Religion
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacuudi_Carabiya&oldid=219384"
Last edited on 12 Oktoobar 2021, at 20:03
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:03.